Isiqondiso sokuhamba ezindaweni zokuqeqesha Mod Ukuhamba
Isiqondiso sokuhamba ezindaweni zokuqeqesha ze-Mod
Ibhalwe on 14 November 2014 . Kuthunyelwe ku Walks
Indawo yokuqeqesha uMnyango Wezokuvikela Wezokuvikela I-GOV.UK
Ama-byelaws ayihlobo lomthetho othunyelwe, osetshenziswe ikakhulu yiziphathimandla zendawo kanye neminyango kahulumeni; zihlanganisa indawo echazwe endaweni, evamile ukulawula imisebenzi ethile ngokuphathelene nokuphepha nokuvikeleka, elawula ukusetshenziswa komhlaba ngokusakaza izindawo ezihlukahlukene ezisuka ezigodini zokudubula ezigodini ezindaweni zasemadolobheni, amalungelo omphakathi ngendlela, kufaka phakathi imigwaqo nemigwaqo, ugijimela izingxenye zeRanges and Area Training.Indawo yesigaba isetshenziselwa ukudubula okuphilayo. Amafulegi abomvu agijima phakathi nosuku futhi izibani ezibomvu zivutha ebusuku ngesikhathi sokudutshulwa okuhlala isikhathi lapho kuvunyelwe khona isikhathi ekuqhumeni kokudubula kwendawo yengozi yeRange.
Ama-Ranges nezindawo eziyingozi zivaliwe emphakathini ngezikhathi zokudubula bukhoma.
Uma ukudubula kungenzeki umphakathi ungakwazi ukufinyelela emigwaqweni yendawo yokuqeqesha ngezinyawo, ihhashi kanye nebhayisikili, Ungakwazi futhi ukuhamba emabhishi uma amafulegi aphansi futhi izibani ezibomvu ziqedwa.
Indawo yokuqeqeshwa yaseCape Wrath itholakala engxenyeni enkulu eNyakatho Ntshonalanga ye-UK Mainland cishe ngamamayela angu-120 ukusuka ku-Inverness.
Indawo yokuqeqesha inikeza amathuba okuba nomlilo omningi wezinsimu kanye nokuqeqeshwa okumelele kuwo wonke ama-acre angu-25,000 we-moorland asezindaweni ezikhudlwana nasezindaweni ezikude.
Yona kuphela iRange eYurophu lapho imisebenzi yokuqeqesha umhlaba, i-Sea ne-Air ingaqhutshwa ngesikhathi esifanayo nalapho iRoyal Air Force ingaqeqesha khona ukusebenzisa amabhomu e-1000lb bukhoma.
Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokuthatha ukufinyelela ku-Cape Wrath Training Area.
Ukufinyelela okuyinhloko endaweni ebanzi kungena ngesikebhe somgibeli ngaphesheya kweKyle of Durness kusuka eKeoldale.
Leli ferry ligijima kancane kancane kusukela ngoMeyi kuya kuSeptemba.
Ukuvama kwenkonzo kuncike esimweni sezimiso zamanzi nezimo zezulu.
Amahora amabili noma yiluphi uhlangothi lwamazinga aphansi isevisi ingayeka ngokuphelele.
Isikebhe singase sisebenze ngaphandle kwalezi zinyanga ngokuhlelwa ngaphambilini.
Ohlangothini lwaseCape weKyle isevisi yebhasi ibhekene nendawo yokuhamba ngesikebhe kanye ne-Cape Wrath lighthouse emgwaqeni womphakathi.
Le nsizakalo iqhutshwa ngasese futhi uhambo oluvela esikebheni kuya endlini yokukhanya futhi emuva kuthatha cishe amahora angu-2 ½.
Umgwaqo womphakathi owela ngaphesheya kweKapa ugijima cishe ngamamayela angu-12 ngakho iningi labantu abafinyelela ku-lighthouse nge-ferry bayasebenzisa le nkonzo okungenani indlela eyodwa.
Amakhilomitha angu-10 emgwaqeni angaphakathi kwendawo yokuqeqesha yaseCape Wrath.
Umgwaqo womphakathi uvaliwe ngezikhathi zokudubula ezibukhoma.
Insizakalo yebhayisikili kanye ne-minibus nayo ivinjelwe phakathi nalezi zikhathi.
Enye indlela eyinhloko yokungena eCape Wrath ukuhamba ukusuka eB Blairmore, eningizimu,
nge-Sandwood indawo kaJohn Muir Trust, eya eKapa Wrath Lighthouse.
Iningi lale mizila ayibonakalisiwe, ngaphezulu kwebala elivulekile futhi elivulekile, futhi alinconywa ngabahamba ngezintambo abangenalwazi.
Abahambahamba nabo bayelulekwa ukuba bahlole izikhathi zokudubula ngaphambi kokumisa kulo mzila, njengoba kufanele kudutshulwe kwenzeke lapho amafulege abomvu nezibani zizoboniswa emngceleni weRange futhi ukufinyelela ngeke kuvunyelwe.
Lo mzila ubumba isigaba sokugcina seCape Wrath Trail, umzila ode kakhulu ukusuka e-Fort William ongaphansi kwe-200 miles.
Indawo yesigaba isetshenziselwa ukudubula bukhoma. Amafulegi abomvu agijima phakathi nosuku futhi izibani ezibomvu zivutha ebusuku ngesikhathi sokudutshulwa okuhlala isikhathi lapho kuvunyelwe khona isikhathi ekuqhumeni kokudubula kwendawo yengozi yeRange.
Uma ukudubula kungenziwanga umphakathi ungakwazi ukufinyelela emigwaqeni yomgwaqo ediditywe ngezinyawo, ihhashi kanye nebhayisikili.
Ungahamba futhi emabhishi lapho amafulege aphansi futhi izibani ezibomvu zicima.
Sicela uhlole njalo izibuyekezo emithethweni ngaphambi kokusebenzisa lezi zindawo.